Brandnew iPhone 4S 1430mAh Kudzosera Bhatiri ne 500 Cycle Life Time
Tsanangudzo:iPhone 4S Battery,iPhone bateri,iPhone 4S Battery upenyu,iPhone 4S Battery Pack,,
Brandnew 0 Purogiramu iPhone 4S Li-ion Battery  Bata Ikozvino
Replacement Battery ye iPhone 4S CDMA & GSM  Bata Ikozvino
iPhone 4S Battery Kudzokorora Lithium-ion Battery  Bata Ikozvino
Brandnew 0 Purogiramu iPhone 4S Battery Kuchinja Li-ion Durable Battery For iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Iko yako iPhone 4S Li-ion Battery inokurumidza kukurumidza? Ko yako iPhone 4S Li-ion Battery percentage inosvika? Izvi zviratidzo zvebheteri...
Kudzorera Bhabhatiri ye iPhone 4S - Inoenderana neA1387 CDMA & GSM Models For iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Wakambofunganya pamusoro pebhetri yebheteri pasina mari 1 nguva zuva nezuva? Ndicho chirevo chemakore 1-2 anoshandiswa iPhone. Kunyange...
iPhone 4S Battery Kudzokorora Lithium-ion Battery
Brandnew iPhone 4S Battery Kudzorera Lithium-ion Battery Kuenda Kunze Battery Life 1.5 Makore For iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Iyi iPhone 4S Lithium-ion Bhabheri rinotsiviwa rinogona kutora bhatiri panzvimbo yako foni. Iwe unayo iPhone 4S iyo...
China iPhone 4S Battery Vatengi
iPhone 4S Battery 3.7V Li-ion ne 500 cycle life life iyo inogadzirwa kubva ku brandnew cell uye nepamusoro bhudziro rekudzivirirwa neFPC, zvose zvigadzirwa zvinowanzogadzirwa. 0 cycle uye iPhone 4S Bhabheri hupenyu huwandu ka 500, kukanganwa kwezinga pasi pe3 ‰. Isu tiri nyanzvi yekugadzira pa iPhone Battery .
Zita remagetsi: 3.7V
Kushandiswa kwemari yakashata: 4.2V
Unyanzvi: 1430mAh (5.3whr)
Usayizi wesero: 42x32x82mm
iPhone 4S Battery iPhone bateri iPhone 4S Battery upenyu iPhone 4S Battery Pack IPhone 4S Battery